Momba anay | Ningbo Golden Classic Lighting Co., Ltd.
Ningbo Golden Classic Lighting Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny jiro LED jiro sy jiro any ivelany. Nanokana ny indostrian'ny jiro nandritra ny 15 taona mahery izahay.
Ny sahan'ny vokatra dia misy ny jiro eny an-dalambe, jiro tondra-drano, jiro amin'ny masoandro, jiro amin'ny zaridaina, Highbay, jiro ary jiro fanaovan-jiro. Tongasoa ireo tetikasa OEM sy ODM.
Ny vokatra rehetra dia manondrana any amin'ny tsena ampitan-dranomasina, anisan'izany i Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana ary Afovoany Atsinanana. Manana mari-pahaizana CE, Rohs ny orinasa. Ny ekipa QC matanjaka dia miasa mafy amin'ny andalana vokatra mifanaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao SO9001-2015. Milamina ary tena tsara ny kalitao.
Ny Golden Classic Lighting dia manana orinasa 15000 m², olona 150 ao anatin'izany ny injeniera 6. Manohy mamokatra vokatra vaovao maro isan-taona izahay.
Fitaovana lehibe misy 1000t, 700t, 300t maty-casting milina, 3 cnc machine, LED fametrahana sy milina welding, Auto Powder coating tsipika, 3 assembling tsipika sy ny fahanterana roa andalana. Ny fahaizan'ny famokarana dia jiro 500 000 pcs isan-taona.
Ankoatr'izay, laboratoara vaovao iray manontolo miaraka amin'ny fahafahan'ny fitsapana IES, IP, fitsapana IK, fanandramana mari-pana miasa ary fitiliana Lumen.
Ny teny filamatra ataonay dia ny vokatra Manamboatra kalitao faran'izay tsara eran'izao tontolo izao. Mikaroka fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa misy kalitao sy vidiny mirary izahay.
Mpanamboatra jiro ivelan'ny trano matihanina izahay.
Ny tanjonay dia ny hanome vahaolana manokana ho an'ny mpanjifa sy ny tsena.
Na dia tsy mitovy aza ny tsena, ny fampiharana ary ny mpanjifa, Jindian dia manana hevitra tokana hitarika ny mpanjifa hahomby.
Ho an'ny consultation sy feedback rehetra dia hamaly am-paharetana sy am-pitandremana izahay.
Ho an'ny fangatahana rehetra, dia hanome teny faran'izay haingana araka izay azo atao izahay.
Ho an'ny vokatra vaovao rehetra, hifampiresaka amin'ny mpanjifa izahay ary handinika ny hevitr'izy ireo mba hanaovana ny vokatra tsara indrindra.
Ho an'ny baiko rehetra, dia hamita ara-potoana ny famokarana.
Handany fotoana sy hery hamahana ny olana rehetra izahay, na toy inona na toy inona fahita mahazatra io. Handray anao foana izahay, ary ho hitanao fa afaka miteny ny fiteninao izahay ary hahafantatra ny haitao misy anao. Izany no antony niarahanay niasa tamim-pahombiazana tamin'ny mpanjifa marobe avy amin'ny firenena samy hafa.
Fototra klasika volamena eo amin'ny sehatry ny orinasa "avo lenta, avo lenta, tsy fahombiazan'ny aotra", jereo tsara ny kalitao, hananganana orinasa mifaninana. Manaraka ny fomba fiasa "pragmatika sy tsy fivadihana izahay, tsy kivy na oviana na oviana, ny asan'ny ekipa, manatsara hatrany", mandray tsara ireo mpanjifa vaovao sy taloha.
Fanamboarana: Manana ekipa R&D matanjaka izahay, ary afaka mamorona sy mamokatra vokatra arakaraka ny sary na santionany natolotry ny mpanjifa.
Vidiny:Manana ny fanamoriana vy izahay, ny milina fametahana masinina ary ny orinasa poleta. Noho izany dia afaka manolotra ny vidiny tsara indrindra sy ny vokatra tsara indrindra izahay mivantana.
Kalitao: Manana ny laboratoara fitiliana anay izahay ary ny fitaovana fanaraha-maso mandroso sy feno indrindra, izay afaka miantoka ny kalitaon'ny vokatra.
Fahafaha-manao:Ny fahafaha-mamokatra isan-taona dia mihoatra ny 1.000.000 napetraka. , azontsika atao ny mamaly ny filan'ny mpanjifa samihafa miaraka amin'ny habetsahan'ny fividianana samihafa.
Vokatra: Mifantoka amin'ny fampiroboroboana vokatra avo lenta ho an'ny tsena avo lenta izahay. Ny vokatrao dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ary aondrana any Eropa, Amerika, Japon ary toerana hafa manerantany.
Serivisy:Ny mpanjifa foana aloha. Anjarantsika ny manolotra serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra, tsy maninona ny mpanjifa lehibe na ny kely.
Fandefasana: 35 kilometatra monja miala ny seranan-tsambo Ningbo izahay, tena mety sy mahomby ny fandefasana entana any amin'ny firenena hafa.